अमेरिकाको मध्यपश्चिमी भागमा अत्यधिक चिसो, जनजीवन प्रभावित « Everestleaks – Nepal's Popular Digital NewsPaper
अमेरिकाको मध्यपश्चिमी भागमा अत्यधिक चिसो, जनजीवन प्रभावित
१७ माघ २०७५, बिहिबार ००:००
NEW YORK, NEW YORK – JANUARY 30: People walk through the snow in lower Manhattan on January 30, 2019 in New York City. Extremely cold temperatures are predicted for New York City in the coming days asaPolar Vortex, which is now over parts of the Midwest, heads towards the region. The upper Midwest is experiencing record breaking temperatures with numerous schools closed and mail delivery halted in some towns and cities due to the extreme cold. Spencer Platt/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
सिकागो, १७ माघ (रासस/एएफपी) – अत्यधिक चिसो हावाका कारण संयुक्तराज्य अमेरिकाको मध्यपश्चिमी क्षेत्रमा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । यहाँको तापक्रम अन्टार्कटिका ध्रुवीय क्षेत्रको भन्दा न्यून छ । हवाई सेवा अबरुद्ध छ भने विद्यालय र व्यवसाय बन्द भएका छन् ।
हुलाक सेवा स्थगित भएको छ भने झण्डै एक दर्जन राज्यका नागरिकलाई घरभित्रै बस्न सरकारले अनुरोध गरेको छ । धेरै वर्षपछि यति बढी चिसो अनुभव गरिएको हो ।
अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले अत्यधिक चिसोका कारण कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको जनाएका छन् । आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्रबाट बहेको हिउँ आँधीका कारण अत्यधिक चिसो अनुभव भएको बताइएको छ ।
चिसोकै कारण अभूतपूर्व दृश्यहरु जताततै देखिएका छन् । जस्तै, मिसिगन तलाउको पानी जमेको छ भने अहोरात्र खस्ने नियागारा फल्सको पानी जमेर रोकिएको छ ।
अमेरिकाको तेस्रो ठूलो सहर सिकागोको मौसम आजसम्मकै सबैभन्दा चिसो छ । सिकागोमा गएराति नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ, र यो अझ तल झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
“यो चिसो ऐतिहासिक छ,” सिकागोका मेयर राहम इमानुएलले बताउनुभयो । “यो चिसोले ज्यानै लिन सक्दछ, र त्यही अनुसार सम्पूर्ण बन्तोबस्त गरिनु आवश्यक छ ।”
विल्डी सिटीको बिहानको तापक्रम माइनस २२ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । अति चिसो हावाका कारण यहाँ माइनस ५० डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेसरह लाग्दछ ।
यहाँको तापक्रम अलास्काको राजधानीको भन्दा बढी छ र अन्टार्कटिका भन्दा यहाँ बढी चिसो छ ।
“यहाँ हिउँको डल्लाकै छेउमा बसेजस्तो अनुभव हुँदैछ,” लियोन गिल्बर्टले बताउनुभयो । “मेरो छाला नै गाँठो परेजस्तो भएको छ ।”
स्यान्डविच पसलका व्यवस्थापक डानियल गोन्जालेजले पनि अरु जस्तै समयमै पसल खोल्न सक्नुभएन । “अरु दिनभन्दा ढिलो अर्थात् विहान ५ बजे पसल खोल्न पुगें । मैले दुईवटा बाक्ला लुगा लगाएको थिएँ, हुड लगाएको थिएँ, त्यसमाथि ठूलो कोट थियो । अनुहार ढाक्ने मास्क थियो र अरु कपडा पनि लगाएको थिएँ, तैपनि मलाई चिसो अनुभव भइरहेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
सिकागोको ओहेयर बिमानस्थलमा पनि व्यवस्थापनको कार्य जटिल बनेको थियो । कर्मचारीलाई बाहिर १५ मिनेटभन्दा बढी समय काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । १८०० भन्दा बढी उडान रद्द गरिएका थिए । आम्ट्राक रेलसेवाले पनि रेलसेवा बन्द गर्नु परेको छ ।
अमेरिकी हुलाक सेवाले इन्डियाना, मिसिगन, इलेनोइस, ओहायो, आयोवा, डकोटा र नेब्रास्कामा चिठीपत्र र अरु सामान ढुवानी स्थगित गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रिय जलवायू सेवाले बिहीबारसम्म यस क्षेत्रको तापक्रम माइनस २५ देखि ४५ डिग्री सेल्सियससम्म रहने जनाएको छ ।
इलेनोइस, मिसिगन र विस्कन्सिन राज्यमा आपतकालीन उपायहरु घोषणा गरिएको छ । मिसिगनकी गभर्नर ग्रेचेन ह्वीटमरले सरकारी कार्यालयहरु बिहीबारसम्म बन्द रहने घोषणा गर्नुभएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका अरु कर्मचारीलाई घरमै बस्न भनिएको छ ।
प्रकाशित : १७ माघ २०७५, बिहिबार ००:००